တစ်ပတ်အတွင်း ရုံတင်ဇာတ်ကားများ (၂၅.၈.၂၀၁၇)
24 Aug 2017 . 2:26 PM
အခရာရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ… မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း အချိန်ကျရောက်လာပြီမို့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့တွင်း ရုံတင်/ ရုံဝင်လာတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို အခရာက ဒီနေရာကတင် လက်တို့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Annabelle ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ပွဲခံနေပြီး မြန်မာရုပ်ရှင်ကားသစ် “သိုက်ကလာတယ်၊ စကားမပြောဘူး” လည်း ဒီတစ်ပတ် သောကြာနေ့မှာ ရုံစဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
နန္ဒာစိုး (ဆင်ဖြူကျွန်း) ရဲ့ ဝတ္ထုကို ဒါရိုက်တာ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ ဒီ “သိုက်ကလာတယ် စကားမပြောဘူး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ မင်းသား ကျော်ရဲအောင်၊နေမင်းတို့နဲ့အတူ မင်းသမီး ခိုင်သင်းကြည်နဲ့ ချစ်သုဝေတို့က တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ မြန်မာကားတို့ ထုံးစံအတိုင်း ဟာသပြက်လုံးတွေ တထောကြီး ကြည့်ရမယ့် ဒီကားကို…
Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်)၊ သမ္မတ၊ သွင်၊မင်္ဂလာ(သိမ်ကြီးဈေး)၊မင်္ဂလာစံပြ၊ Top Royal ပါရမီ စိန်ဂေဟာ ပွဲချိန်
9:30AM,12:00PM,3:00PM,6:00PM,9:00PM (Fri to Sun)
9:30AM,12:00PM,3:00PM,6:00PM (Mon to Thu)
10:00AM,12:45PM,3:30PM,6:30PM,9:30PM (Fri to Sat)
10:00AM,12:45PM,3:30PM,6:30PM (Sun to Thu)
09:45AM,12:45PM,3:45PM,6:45PM,9:45PM (Fri to Sun)
10:00AM,12:45PM,3:45PM,6:45PM,9:30PM(Fri to Sat)
10:00AM,12:45PM,3:45PM,6:45PM (Sun to Thu)
ဝင်းလိုက်၊မြို့မ၊မန်းနေပြည်တော် (ဆိုင်းတန်း) ပွဲချိန်
9:30AM,12:30 PM, 3:30PM, 6:30PM, 9:30PM (Fri to Sun)
9:45AM, 12:45, 3:45PM,6:45 (Mon to Thu)
၂၅.၈.၂၀၁၇ (သောကြာနေ့) တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မြို့ကြီးများတွင်ပြသမည့် ?"သိုက်ကလာတယ်စကားမပြောဘူး" ? ဇာတ်ကားမှ ဇာတ်ဝင်ခန်း…?အောင်စိန် နဲ့ သာမောင် တို့ ပေါကြည်ကိုခုတုံးလုပ်တာအားမရလို့ ကိုယ်တော်ကြီး ကိုယ်တော်လေးကိုပါအသုံးချတဲ့ အခွီကွက်?
Posted by သိုက်ကလာတယ် စကားမပြောဘူး on Tuesday, 22 August 2017
၂။ Vivegam -2D
Vivegam ဆိုတာ အိန္ဒိယ သူလျှိုဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Siva က ရေးသားရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Ajith Kumar က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ရိုက်ကူးထားပြီး Vivek Oberoi၊ Kajal Aggarwal နဲ့ Akshara Haasan တို့က အားဖြည့်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
9:40AM,12:30PM,3:30PM,6:30PM,9:25PM (Fri to Sun)
9:40AM,12:30PM,3:30PM,6:30PM (Mon to Thu)
JCGV City Mall (St John) ပွဲချိန်
09:30AM,12:30PM,3:30PM,6:30PM,9:30PM (Fri to Sun)
09:30AM,12:30PM,3:30PM,6:30PM (Mon to Thu)
Mega Ace Cinplex (တာမွေ၊ရွှေဗဟို) ပွဲချိန်
၃။ Jab Harry Met Sejal – 2D
ဒီကားကတော့ ဒါရိုက်တာ Imtiaz Ali ရိုက်ကူးထားတဲ့ အိန္ဒိယအချစ်ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး မင်းသား ရှာရွတ်ခန်းနဲ့ မင်းသမီးအနူကာရှာမ တို့ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီး ဒီကားဟာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် တွဲဖက်ရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားဟာ ပရက်ဂ်၊ အမ်စတာဒမ်၊ဗီယင်နာ၊ ဘူဒါပတ်၊ လစ္စဘွန်းစတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီကားတွေ ဘယ်မှာ ရုံတင်မလဲဆိုတာတော့
နေပြည်တော်၊ ရှေ့ဆောင် ပွဲချိန်
ဒီကားဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Annabelle ရဲ့ ကနဦးအခြေအနေကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားဖြစ်ပြီး The Conjuring Series ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ လေးကားမြောက်ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ US မှာ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ကမှ ရုံတင်ထားတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ သိပ်မကွာပဲနဲ့ ဒီမှာလည်း ကြည့်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IMDB Rating 7.1 ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာ 67% ရရှိထားတဲ့ ဒီကားဟာ လက်ရှိ Box Office မှာလည်း နံပါတ် ၂ နေရာရရှိထားဆဲပါပဲ။ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေဆီက အကောင်းမြင်မှတ်ချက်တွေလည်း ရရှိထားတဲ့အတွက် မနှေးအမြန် သွားကြည့်သင့်ပါပြီ။
နေပြည်တော်၊ Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်)၊ မင်္ဂလာဒဂုံစင်တာ ၂၊ မင်္ဂလာစံပြ ပွဲချိန်
5:50PM,7:00PM,9:30PM (Fri to Sun)
10:00AM, 12:15PM,1:00PM,2:30PM, 3:20PM,4:00PM, 7:00PM(Mon to Thu)
JCGV Juntion Square ပွဲချိန်
8:30PM,9:15PM (Fri to Sat)
09:30AM,11:50AM,12:30PM,2:10PM,4:30PM,6:00PM,6:50PM (Sun to Thu)
10:00AM,12:15PM,2:40PM,5:00PM,7:20PM,9:40PM (Fri to Sun)
10:00AM,12:15PM,2:40PM,5:00PM,7:20PM (Mon to Thu)
9:45AM,12:00PM,2:15PM,5:00PM,7:30PM,9:45PM (Fri to Sat)
9:45AM,12:00PM,2:15PM,5:00PM,7:30PM (Sun to Thu)
Mega Ace Cinplex (သာကေတ၊မြရတနာ) ၊ (တာမွေ၊ရွှေဗဟို)ပွဲချိန်
Mega Ace Cineplex (မြောက်ဥက္ကလာပ၊ကန်သာယာ) ပွဲချိန်
10:15 AM, 12:45PM, 3:45PM, 6:45PM, 9:15PM
10:00AM,1:00PM,4:00 PM,7:00PM, 9:15PM (Fri to Sun)
10:00AM,1:00PM,4:00 PM,7:00PM (Mon to Thu)
အကယ်ဒမီထွန်းထွန်းတစ်ယောက် အစွမ်းကုန် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားကြီးကတော့ ရုံတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ စတီးလ် (ဒွေးမေတ္တာ) ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ ခန့်စည်သူ၊ အိချောပိုနဲ့ အခြားသရုပ်ဆောင်တွေ သိုင်းဝိုင်းပါဝင်ထားပြီး အခုဆို နှစ်ပတ်မြောက်အဖြစ် ဒီရုံတွေမှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ဆောင်၊ Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်)၊ မင်္ဂလာစံပြ၊ မင်္ဂလာဝဇီရာ ပွဲချိန်
9:35AM,7:10PM, (Fri to Sun)
9:35AM,4:50PM,7:30PM (Mon to Thu)
09:45AM,03:30PM (Fri to Thu)
Mega Ace Cineplex (သာကေတ၊မြရတနာ) ပွဲချိန်
9:45AM, 12:45, 3:45PM,6:45, 9:45PM (Fri to Sun)
9:30AM,12:30 ,3:30PM,6:30PM (Mon to Thu)
Mega Ace Cineplex (ချမ်းအေးသာဇံ၊မြို့ဂုဏ်ရောင်) ပွဲချိန်
၆။ ကြောက် ကြောက် ကြောက်
10:00AM,12:40PM,8:40PM(Fri to Sun)
10:00AM,12:40PM,5:50PM (Mon to Thu)
၇။ Cars 3
ဒီကားဟာ Cars ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ ၃ကားမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထွက် Cars2ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ Lightning McQueen ဟာ မျိုးဆက်သစ်ပြိုင်ကားတွေကြားမှာ သူသာလျှင် အကောင်းဆုံးပြိုင်ကားဖြစ်သေးကြောင်း သက်သေပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IMDB Rating မှာ 7.1 ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာတော့ 68% ရရှိထားပါတယ်။ လက်ရှိ Box Office မှာ No. 24 ရောက်နေပြီး အပြုသဘောဝေဖန်မှုတွေရတာ များတာကြောင့် ရုံအရောက် ပြေးကြည့်သင့်တဲ့ Animation ကားလေးပါပဲ။
Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်) ပွဲချိန်
10:30 AM, 1:00PM, 4:00PM, 7:00PM, 9:30PM
Mega Ace Cineplex (ချမ်းအေးသာစံ၊မြို့ဂုဏ်ရောင်) ပွဲချိန်
ပရိသတ်တို့မျှော်လင့်စောင့်စားနေသောဘုန်းကညာနှစ်ပါး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား နမူနာလာပါပြီး၂၁.၇.၂၀၁၇ မှာ ရုံတင်ပြသမှာမို့လာကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့ နော်
Posted by ဘုန်းကညာနှစ်ပါး -ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး- on Wednesday,5July 2017
လက်မှတ်စိတ်ချရအောင် တစ်ပတ်စာကြိုတင်Booking လုပ်လို့ရအောင် အောက်မှာလည်း ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေ ရေးပေးထားလို့ မနှေးအမြန် ပြေးသာဆက်ပါတော့ဗျို့။